Ejirila MCN nylon belt pulley na ụlọ ọrụ igwe maka ọtụtụ iri afọ maka uru na-enweghị atụ nke obere mkpọtụ, gbasaa ndụ ọrụ nke eriri waya, ite mmanụ na ihe ndị ọzọ.
A na-ejikwa rollers naịlọn. A na-eji pulleys eme ihe ebe ọ bụla enwere eriri nchara. A na-eji paịlị a na-emebu eme ihe, nke a na-atụgharị na ihe ndị ọzọ. Ngwongwo igwe na-eme ka eriri USB kwụsị, na-emetụta ndụ nke eriri dị oke ọnụ ma na-eyi egwu iji ngwa ahụ arụ ọrụ. Ojiji ihe nkedo naịlọn imepụta ihe na-emepụta ihe bụ iji dozie nsogbu dị njọ nke ngwongwo ọla ma mepụta ma tinye ya n'ọrụ
A na-eji eriri naịlọn jikọta oghere abụọ (ịkwọ ụgbọ ala na nke a na-akwagharị) na usoro dị iche iche ka ha wee nwee ike ịtụgharị ọnụ iji kesaa akụkụ ndị ọzọ. Na nnyefe ikike dị elu ma na-ebu ibu, ụfọdụ jikọtara ọnụ nwekwara ọrụ nke nchekwa, na-egbochi ma melite arụmọrụ dị omimi nke shafting.
A na-etinye ihe mmịbanye naịlọn na crane, ma enwere ike ịmepụta ya na nha dị iche iche, iji nweta ihe dị iche iche ụgbọ ala chọrọ.
na-ekpo ọkụ na-ere naịlọn pole wheel
A na-ejikarị ngwongwo Naịlọn eme ihe n'ọtụtụ ebe na-ebuli ihe dị ka akụkụ nke ihe mkpuchi ụlọ elu, jiri nwayọọ nwayọọ dochie ihe ochie ochie na uru ha pụrụ iche. Ngwunye naịlọn nwere ike ịrụ ọrụ nke ịta mmanụ maka nzube nke iji dochie nchara na plastik
Naịlọn mkpịsị akwụkwọ pole na kacha mma price
Naịlọn mkpịsị pole na-akpan sized itinye na winch igwe. Winch, na a drum asọfe ígwè waya eriri ma ọ bụ yinye iji bulie ma ọ bụ bufee arọ obere na ìhè n'ibuli akụrụngwa, makwaara dị ka winches
Ebe imepụta ihe nịịl pin dị na bushing. A na-ejikarị nịịlọn akpa eme ihe na nhazi nke ebu. E jiri ya tụnyere nchara nchara, naịlọn mkpọ na-adị mfe mebiri emebi, nke ana achi achi na mgbagwoju Ebu na-adịghị emebi. Ya mere, a kwenyere na iji mkpọ nylon ndị a ga-belata oke mkpofu nke ebu.